Ikhekhe epanini lokuthosa liyashesha futhi elihlwabusayo - zokupheka ezilula zamaqebelengwane, amaqebelengwane aphekwe epanini lokuthosa ihafu yehora
Indlu yasekhaya Ukupheka Ukubhaka Amakhekhe
Ikhekhe i-dessert ephelele yeliholide. Iningi labantu lisetshenziselwa ukuyithengisa - manje esitolo esiseduze noma esitolo esitolo esiseduze ngokukhethwa okubanzi kwaleli bhaka elimnandi. Noma kunjalo, ikhekhe elimnandi kakhulu, elihlangabezana ngokugcwele nokuthandayo, ungapheka kuphela ngezandla zakho.
Ikhekhe epanini lokuthosa - okusheshayo futhi elimnandi!
Inkinga enkulu ekuphekeni izidlo ezinjalo kubhaka amaqebelengwane. Akuwona wonke umsizi wesimanje onesikhathi samanje onokupheka ngokweqile ikhekhe ngalinye. Ngenxa yale nqubo enzima, lapho kukhona iphutha eligcwele umonakalo kwisidlo (ngisho nokushiswa okukodwa, okomile kakhulu noma okwenziwe ngokwanele okubhaka kungabhubhisa konke), abaningi bayenqaba ikhekhe. Futhi noma ngabe ubhaka nge "wena", ukupheka kuzothatha okungenani ihora nengxenye. Kukhona indlela emangalisayo yokuphuma kule simo - hhayi kuphela ihhavini, kodwa futhi i-pan yokudoba ifaneleka ngamaqebelengwane okubhaka. Abaningi besifazane bahlanganyela ngokuhlangenwe nakho kwabo ngenjabulo, bebonisa izindlela zokukhanya ezilula futhi ezilula epanini. Uma ungakakholelwa ukuthi ungakwazi ukupheka ikhekhe epanini lokuthosa ihafu yehora, zama enye yezindlela zethu zokupheka!
Indlela yokulungisa amaqebelengwane athambile ngekhekhe epanini lokuthosa?
Ukuze uthole amaqebelengwane athambile wekhekhe epanini lokuthosa, ungasebenzisa izindlela zokupheka:
I-cottage shizi enesisindo esingama-200 amagremu kumele iguqulwe ngilazi yoshukela futhi ixubene neqanda eliyingcosana. Bese wengeza ushukela we-vanilla kanye ne-teaspoonful soda (akudingekile ukuyiqeda ngeviniga - kuzosabela nge-lactic acid kusuka e-cottage shizi). Ama-50 g we-bhotela kuphela kufanele anqunywe ku-350 g wefulawa, phezulu ukuze abeke umthamo we-curd futhi axoke inhlama. Bese uhlukanisa inhlama ibe yizingxenye ezingu-8 ezilinganayo bese uphuma amaqebelengwane. Ukushisa kancane ipani lokudoba nokushisa okuphansi futhi gazinga amaqebelengwane ngaphandle kokwengeza amafutha.
Izipuni ezimbili zobisi ezixubene ne-50 g webhotela bese wengeza i-spoonful ye-soda. Ngokwehlukana, shaza amaqanda amabili nge 200 grams ushukela. Ama-masses aphethwe kumele ahlanganiswe futhi afakwe emanzini okugezela amaminithi ama-5. Ukuvuselela njalo inhlama yesikhathi esizayo, uthele kuwo izibuko ezimbili zefulawa bese ugcina, ngaphandle kokuyeka ukugubha, eminye imizuzu emihlanu. Beka inhlama eseqediwe etafuleni elandelwa ngaphambili bese uhlukanisa zibe izingxenye ezingu-10. Ama-billets amaqebelengwane kufanele afakwe efrijini isikhathi esingangxenye yehora ukuze abuyisele uju kubani bawo futhi aqinise inhlama. Ngemuva kwalokhu, gcwalisa ngokushesha izikhala phakathi kwamaqebelengwane futhi gazinga ngaphandle kwamafutha epanini.
Iresiphi esheshayo yekhekhe epanini lokuthosa ikhekhe lesigamu sehora!
Njengoba ubona, ukulungiswa kwamaqebelengwane epanini lokuthosa kuthatha imizuzu engu-25-35. Ingxenye yesibili ukhilimu wekhekhe. Indima enkulu idlala yizindiza zomcabango wakho. Ungenza ukhilimu olula ngobisi oluncibilikile noma ukhilimu omuncu ngoshukela. Zama futhi ujabule! Zama ukumboza ikhekhe eliqediwe nge-chocolate glaze, ukuhlobisa ngesikhwama se-confectionery, engeza izithelo ezintsha noma ezomile ukhilimu, nesikhumbuzo - izinongo (i-clove, isinamoni, i-vanillin). Ukuze uthole ikhekhe epanini lokuthosa ngehora lehora, bala isikhathi sokupheka:
Imaminithi engu-10-15 - ngokuxolela inhlama nokuthosa amaqebelengwane;
Imizuzu engu-10 - ukulungiselela ukhilimu;
Imaminithi ama-5 - ukugcoba nokupakisha komkhiqizo ophelile.
Uma ungenayo ngempela ihora elisele, kufanelekile ukuyeka izindlela zokupheka nge-custard, ngoba kunzima ukupheka ngemizuzu engu-10. Kungcono ukwenza ama-coke 7 noma 8 (uma upheka 10 noma ngaphezulu, azoba mncane kangangokuthi azokuma eduze ne-pan, futhi amancane amaqebelengwane amancane azokuvumela ukupheka ukhilimu phakathi kwama-roast). Indlela elula yokuhlobisa i-dessert yilapho ukusika amaqebelengwane enqenqemeni, etholakala ngokuwafafaza ngawo wonke amahlangothi. Bon appetit!
I-Profitroles ne-ayisikhilimu ne-caramel sauce
I-Orange lemon cheesecakes enomile omisiwe
Iqoqo le-chocolate likhishwa ukhilimu omuncu
Amaqebelengwane angama-chocolate nama-pecans
Ikhekhe "Minute" ku-microwave
Ikhekhe "Banana Shell"
Kufanele kanjani ingane ithole isisindo ngonyaka wokuqala wokuphila
Indlela yokumboza itafula lokugubha idili
Ungasusa kanjani ingxenye yezinwele?
Izakhiwo eziwusizo zezithelo persimmon
Ukukhulelwa okukhulelwe ezinkathini zokuqala
Iqiniso lonke mayelana ne-cellulite
Khetha ikhishi: isitayela nesingabizi
Indlela yokuphula, ukunqoba amahloni akho, ukuthobeka?
Indlela yokubukela ukunciphisa impumulo nge-makeup